gaulejetho 1885 days ago
Visitor from US is reading लगानी बोर्डका सिइओको तलब २ लाख ७५ हजार !
Visitor from US is reading Ditto Angelina Jolie jasto Nepali kt
Visitor from CA is reading Question about Warning on TPS Advance Parole
Visitor is reading Chinese music stolen by nepali singer
Visitor from US is reading SQL SERVER DBA CONSULTANCIES!!!
[VIEWED 1678 TIMES]
Posted on 07-22-16 4:23 AM Reply [Subscribe]
५ साउन, काठमाडौं । देशको सबैभन्दा विशिष्ट पदाधिकारी अर्थात् राष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार र मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार छ । उसो भए, सचिव सरहको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को मासिक तलब कति होला ?
तपाईंलाई अचम्म लाग्नसक्छ, लगानी बोर्डका सिइओको तलब राष्ट्रपतिको भन्दा झण्डै दोब्बर छ ।
हाल लगानी बोर्डको सिइओ महाप्रसाद अधिकारी छन् र उनको हालको तलब मासिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको मासिक तलब २ लाख ७५ हजार तोकेको हो ।
यसको अतिरिक्त अधिकारीले सरकारी सुविधा वापत गाडी, इन्धन, गाडी मर्मत खर्च, चालक र पत्रपत्रिका शीर्षकमा थप तीन हजार रुपैयाँसमेत पाउनेछन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने एउटा कार्यालय प्रमुखका लागि यति धेरै तलब सुविधा दिने निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो ।
नियुक्त गर्नेको तलब ५५ हजार, नियुुक्त हुनेको २ लाख ७५ हजार !
लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति जवाफदेहि हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै लगानी बोर्डको प्रमुख तोक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार छ ।
यस्तै मुख्य सचिवले आवश्यक पर्दा लगानी बोर्डका सिइओलाई काम लगाउने र आवश्यक निर्देशन दिन्छन् । तर, मुख्य सचिवको तलब भने ५५ हजार २ सय रुपैयाँमात्र छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सिइओको तलब तोक्न फाइल उठाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक पूर्वाधार महाशाखाबाट फाइल उठेर प्रशासन महाशाखा हुँदै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कार्यकारी अधिकृतको तलव प्रस्तावको फाइल पेश भएको थियो । र, असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
के हो लगानी बोर्डको जिम्मेवारी
देशमा उद्योग धन्दाको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु लगानी बोर्डको मुख्य काम हो । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न देखिएका समस्या हटाएर विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्नु बोर्डको मुख्य काम हो ।
यही काममा सक्रिय भएको भन्दै सरकारले लगानी बोर्डका कर्मचारीहरुलाई पचास प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिन्छ ।
सरकारले लगानी बोर्ड जस्तै अर्को निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ । जसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली छन् । उनको मासिक सेवा सुविधा भने मन्त्री सरह छ ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ तलबमान अनुसार मन्त्रीको मासिक तलब ६४ हजार रुपैयाँ छ । यसको अतिरिक्त गाडी, इन्धन, चालक लगायतका सुविधा पनि हुन्छ ।
२०७३ साउन ५ गते २०:२३ मा प्रकाशित
Last edited: 22-Jul-16 05:40 AM
Posted on 07-22-16 10:30 PM [Snapshot: 226] Reply [Subscribe]
2 lakh khayer2karod deshko lagi faida banaye ta kehi farak pardaina... talab bujne ra meeting matra garne vaye ta lakhetnu parchha sathi ho....